Kuridza - Alerts - musi B787 sei deactivate?
mubvunzo Kuridza - Alerts - musi B787 sei deactivate?
2 makore 1 zuva rakapfuura - 2 makore 1 zuva rakapfuura #475 by FlyingFranz
Ini chete paIndaneti kuti B787 Dreamliner kubva Ricoooo uye iiswe nayo.
Zvisinei, apo kubhururuka, kungwaririra mashoko kuridza kwazvo muna nzvimbo yemutekenyi.
Handina kuwana kuti deactivate papi.
handina dambudziko iri nevamwe aircrafts. Zvinongoratidza kuratidza chenjedzo pamusoro chidzitiro (nechepazasi kurudyi.)
Chero rubatsiro ndapota.
Last edit: 2 years 1 day ago by FlyingFranz.
2 makore 1 zuva rakapfuura #476 by Gh0stRider203
Ini pachangu kudziwana anobatsira, asi mumwe nomumwe wavo, Eh?
Zvadaro zvakare, pane nguva handisi chaizvoizvo kwazvo "Bitching Betty" elnaz
hazvina kuoma. chete Goto ruzha forodha nokuda iyoyo chaiyo ndege, uye aongorore sound.cfg faira kuti ndege kuti, kuchinja huripo filename kuti "filename = runyararo"
Kuti VANOFANIRA kuchigadzira, ndinofunga ... elnaz regai mashoko Me musi sezvo ndava kumboedza ichi pamberi.
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: FlyingFranz
2 makore 1 zuva rakapfuura #477 by FlyingFranz
Ndinotenda pamusoro pemhinduro yekukurumidza.
Ndakaedza ... No zvakanaka!
Hakuna chitsauko "Sound chenjedzo" iri sound.cfg faira iyi kunyanya ndege.
Thanks zvakadaro. Ndinenge kuedza zvakare nokuenzanisa ichi sound.cfg faira nevamwe mafaira zvakafanana.
2 makore 1 zuva rakapfuura #478 by Gh0stRider203
Handigoni kubhururuka kubva 787 pebenzi chokwadi kuti hazvina kukodzera kuva muna VA, mu My nezvaunofunga. Nokuti Me, zvose kuda kuita mari, uye apo 787 angave pedyo chete siyana sezvo 772LR (yatiri REGAI tine), hachigoni kutakura chete nhamba vanhu sezvo muchaona mu screenshot ichi .. .which kunoreva zvishoma $ nokuda VA.
Mazvita wakagamuchira: 5
1 gore 11 ago #498 by Tonny0909
Just kuwana mafaira iwayo wav- pamusoro simobjects / ndege / planename / ruzha uye zvinomuomera kuikanganwa avo. somuenzaniso "callout100.wav" etc.
1 gore 11 ago #499 by FlyingFranz
Ndinotenda nekuda kwemhinduro.
Zvisinei, haisi ruzha pachayo iri kunetsa, asi kuti hazvigoni deactivated iyi kunyanya ndege. Handina dambudziko nevamwe aircrafts pasi FSX.
Mune B787 mafaira, pane imwe bumbiro kuti zvinoda kungwarira ruzha izvi. zviri chinovhiringidza zvikuru nokuti kana Somuenzaniso, anoburukira iri chete zvishoma zvokutadza pamawere, makagadzirira rinonzwika kunyange mwero wakarurama.
All ndaigona kuita kwaiva kuderedza inzwi dhigiri chokuita mafaira mu huru "Ruzha" forodha (kubva 10000 kusvika 6000.)
6 mwedzi 3 mazuva apfuura #1211 by FlankerAtRicoo
Shandisa [gpws] mu ndege.cfg
Kana pasina che [GPWS] chikamu chingosika imwe chete.
Ichi chikamu chinogadzirisa tsanangudzo yepasi pedo yekuchenesa system.
max_warning_height Kureba kwezasi uko nyevero inoshandiswa.
sink_rate_fpm Kana ndege ichipfuura chiyero ichi chekuzvarwa nyevero inobviswa.
excessive_sink_rate_fpm Kana ndege ichipfuura chiyero ichi chekuzvarwa, nyevero inokurumidza inobviswa.
climbout_sink_rate_fpm Kana ndege inotanga kuburuka panguva yekutora, uye ichipfuura ichi chiyero chekuzvarwa, nyevero
flap_and_gear_sink_rate_fpm Kana ndege iri kuuya, uye inodarika chiyero ichi chokumera pasina zviputi kana gear yakawedzerwa,
; // Iyi Dhiyabhorosi 'haidonhi', 'pasi-mavhiri', etc inodanidzira
; // Kutendeseka kwe & & Rutendo kuna Rob Barendgret
Time chokusika peji: 0.223 mumasekonzi